Laba gabdhood oo somali ah oo abaabulaya maalinta xijaabka - NorSom News
Laba gabdhood oo somali ah oo abaabulaya maalinta xijaabka
Maryama iyo Samiro oo ah 17-jiro soomaali ah ayaa maalinimada sabtida ah ee ku aadan 7-bisha may abaabulaya maalinta xijaabka. Waxa ayna dhaheen inay istaagi doonaan wadada dheer aa Karl Johan si ay u qaybiyaan buugaag ku saabsan haweenka iyo islaamka, kana jawaabaan cidii su aal ula timaada. Waxay kaloo intaa ku dareen in qofkii raba inuu isku fiiriyo xijaabta uu tijaabin karo.
Gabdhahan aadka u da-da yar balse xambaarsan fikirka weyn ayaa sheegay inay fikirka ka keeneen World Hijab Day oo ah maalin la qabto bisha febraayo kowdeeda. Ayna ku fakareen inay fikir noocaas oo kale ah ay ka dhaqan galiyaan Norwey
Maryam oo ku dhalatay kuna kortay Norwey ayaa sheegtay inay bilowdey inay xijaabka xirato markii ay jirtay 12-sano, ayadoo markaa soomaaliya joogtay dhowr sano. Waxayna sheegtay inaysan dhibaato weyn kala kulmin xirashada xijaabka, marka laga reebo in xiliyada ay joogto garoomada diyaaradaha il gaar ah lag eego. Balse ay jiraan gabdho saaxiibadeed ah oo aflagaado iyo cay loogu dhexgaystay T-banaha xijaabka dartiis. Dad badan ayaa nagu qiimeeyo xijaabkeena, sidaas darteed ayaan ubaabulaynaa arintan, si aan ugu sheegno dadka in xijaabka aan xiranahay uusan khatar cidna ku aheyn.
Journalka Osloby oo ah qayb kamid ah aftenpostenka ayaa gabdhahan waydiiyay: maadaama ay ayaga da-ahaan yaryihiin, miyaysan fiicneyn inay arintan u daayaan ururada muslimiinta ah ee waaweyn iyo masaajidada. Waxay ay ku jawaabeen in arintan ay khusayso ayaga(Gabdhana), isla markaana ay rabaan in soo bandhigaan.
Halkan ka akhri waraysiga laga qaaday gabdhahan oo norsk ah(les saken på norsk her).
Halkan ka fiiri abaabulka ay gabdhan ka wadaan facebooga
webka ay leeyihiin ururka xagjirka ah aadna uga soo horjeedo islaamka iyo muslimiinta ayna madax ka tahay habarta xagjirka ah Hege Storhaug ee ayaa arinta saaka si jees-jees ah u soo daabacay.
Previous articleTirada Soomaalida iska soo dhiibaysay Norwey oo sanadkan 2016 wax badan hoos u dhacday.
Next articleProf. M.Osman Jawaari oo xili xasaasi ah Norwey kusoo wajahan.